Mpandray Anjara amin'ny Mozilla Support | Fanampiana Mpandray anjara
Mpandray Anjara amin'ny Mozilla Support
(Navily avy @ Localize Firefox Help)
Mety lany daty ity lahatsoratra ity.
Nisy fanovana lehibe natao tamin'ilay lahatsoratra @ teny Anglisy izay nifotoran'izy ity. Mandram-panavaozan an'ity pejy ity, dia mety ho hitanao hoe manampy ity: How to contribute to article localization
Misaotra ny mamaky any ity teny ity - Zay midika oe ianao tia hanampy ny Mozilla Support. Ny asasakin'ny mpammpiasa ny Firefox dia miteny zavatra hafa no ny Ingilisy, ary izay dia miankina amin'ny mpandray anjara toa anao mba ho tsotra ny ahazoan'ny olono eran-tany ny fanohanana ara teknika.
Izahay dia faly foana mandray olona vaovao. Azafady mba jerevo kely ilay list of available locales, ahitanao raha efa misy ny fitenao. Raha mbola tsy misy kosa, izay dia faly iara-miasa aminao mba hanampianay anilay fiteny aminy naviguateur'nay. Fa raha hiatnao amin'ilay lista ilay fiteninao, dia afaka aviatrany micliky anilay fiteny ary ahita ny anaran'ilay mpitondra vondrona. Afaka manontany any zareo zava maro momba ny fitadiavana lahatsoratra ny SUMO amin'ny fitenao ianao.
Izaho te-hanampy. Inona no tokony ataoko ?
Create a SUMO account, izay ahafahanao manoratra amin'ity community l10n forum ary mahita ny lahatsoratra hitanao ao amin'ny SUMO
Rehefa manana kaonty ianao, azafady mba jerevo ito l10n community forum ary ampahafantaro ny tenanao. Ny communauté dia afaka mamaly ny fanontanianao ary manampy anao amin'ny fanomboana.
Ahoana raha efa misy olona ao amin'ny fiteniko ?
Raha hitanao fa voatanisa ao amin'ny list of available locales Tokony mikaroka amin'ny anaran'ny Mpitarika ianao ary mandefa hafatra manokana mba hifandraisana aminy. Aza mody saro-kenatra ;) , ho faly izy ireo hihaino anao - ozy ny vazaha hoe "plus on est de fous, plus on rit" sa tsy zany ;) ?
Raha toa ka tsy mamaly afaka fotoana fohy izareo (afaka andro vitsyvitsy - mety mba lasa vakansy kosa ry zala na oe mba vizaka be fotsiny), manandrama mpitarika hafa na send a private message to Michał, izay afaka manampy anao manomboka.
Ahoana raha mbola tsy misy ny votoaty amin'ny fiteniko?
Raha mbola tsy misy amn'ity ny teny nao list of available locales, azafady araho ity send a private message to Michał ary ho hitan'areo miaraka izay tokony hatao momba izany.
Raha Misy fanontaniana? Mila fanampiana hafa moba izany ve ianao ? Azafady mba lazao anay amin'ny l10n forum.
Mpandray Anjara amin'ny Mozilla Support (you are here)